Samsung Pay kwupụtara ọkwa ya na BBVA na Spain | Gam akporosis
Samsung Pay bụ ọrụ ịkwụ ụgwọ nke dị ugbu a na ụfọdụ nke Korean ika si smartphones. Nke a n'elu ikpo okwu dị maka oge ụfọdụ na ahịa dị ka España y Mexico. N'ihe banyere ahịa Spanish, ọ dị ka n'ụzọ ụfọdụ ọ agwụbeghị iru ewu ewu nke ọtụtụ tụrụ anya ya. Ọ bụ ezie na ọ na-efu ya na ụfọdụ nnukwu ụlọ akụ ahụ dakọtara. Ihe mechara mee.
Kedu ihe kpatara BBVA ji rute na Samsung Pay. Otu abụọ ekwenyela nkwekọrịta a, nke ga-enye ndị ọrụ ohere ịkwụ ụgwọ ekwentị na mkpịsị aka na-eji ngwa a na ekwentị ha. O doro anya na nkwekọrịta dị oke mkpa.
The Korean ika si ugwo n'elu ikpo okwu bụ dakọtara na ọtụtụ mbinye aka ekwentị. N'ezie, ọ bụ ya na smartphones niile dị na Galaxy S kemgbe Galaxy S6. Na mgbakwunye na ndị ọzọ dị ka Galaxy Note 8 na Note 9, Galaxy A5 si 2016 na 2017, Galaxy A8, na ekpughere nso nso a Galaxy A50 na ndị ọzọ. Ọzọkwa na mbinye aka smartwatches, dị ka Galaxy Watch Ọrụ, Galaxy Watch, Gear S3 na Gear Sport.
Eziokwu ahụ bụ na BBVA ruru Samsung Pay ugbu a bụ ihe dị oke mkpa. Ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime ụlọ akụ kachasị mkpa na Spain. Nke ga - enyere ọtụtụ ndị ahịa aka itinye akaụntụ ha ugbu a na usoro ịkwụ ụgwọ Korean brand. Ya mere, inwe ike ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ na ekwentị gị n'ụzọ dị mfe.
Enwere ike ịzụta NFC site na iji NFC, kamakwa site na mkpisi aka. Ekwenyela nke a mgbe ekwusara ọbịbịa BBVA na Samsung Pay. Nke a ga - enyere ndị ọrụ aka ịzụrụ ihe n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ụlọ na Spain oge niile.
BBVA bịara Samsung Pay afọ abụọ mgbe Banco Santander mechara. Yabụ ụlọ ọrụ ụlọ akụ kacha mkpa dị na Spain na-arụ ọrụ na ngwa ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ Korea. Nkwekorita nke kwesiri inye aka dika nkwado ya. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » BBVA mechara rute Samsung Pay na Spain
VIVO V1901A pụtara na TENNA na-egosi atụmatụ ya na akụkụ nke njirimara
Motorola na-arụ ọrụ na ekwentị nwere usoro ọhụụ ọhụrụ